Boqollaal aan Muslimiin ahayn oo laga afuriyay masaajid | Biyoguurenews.com
Home Wararka Boqollaal aan Muslimiin ahayn oo laga afuriyay masaajid
Boqollaal aan Muslimiin ahayn oo laga afuriyay masaajid
Qiyaastii laba boqol oo qof oo u badan dad caddaan ah oo aan Muslimiin ahayn balse daris la ah Masaajid lagu magacaabo Darul Faruuq oo kuyaal magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ayaa lagu marti qaaday kulan afur ah oo ay lahaayeen muslimiinta xaafaddaas.
Afurkaas ayaa waxaa iska kaashaday maamulka masaajidka iyo ururka Islaamiga ah ee iskuullada magaaladaas.
Ujeeddada ayaa lagu sheegay in ay tahay sidii dadkaas loogu sharrixi lahaa waxa ay tahay bisha barakaysan ee Ramadaan iyo in laga jaahil bixiyo su’aalaha ay dadkaasi doonayaan in ay Muslimiinta waydiiyaan.
Cabdulaahi Faarax oo ka mid ah maamulka masaajidkaas ayaa ka hadlay ujeedada kulankaas iyo waxa ay uga golleeyihiin waxa uuna yidhi: “kulamadaan oo kale waxaa laga faa’idayaa in dadka xaafadda, magaalada ama gobolka nala daggan ay arkaan oo ay soo galaan meel masaajid ah oo ay Muslimiinta bartaan su’aalahoodana looga jawaabo”
Saacad kahor xilliga afurka ayey dadkaasi dariska la ah masaajidkaas ay soo fadhiisteen goobta ciyaaraha ee masaajidka iyadoo 7-dii qofba lala fadhiisiyey qof muslim ah oo u sharaxa su’aalaha gaarka ah oo ay qabaan.
Kurdis Dian oo ah Madaxa Midowga Kiniisadaha Minnesota ayaa waxa uu qabaa in kulamada noocaan ah ee isdhexgalka ah ay horseedi karaan inay hoos u dhacaan falalka Islaam nacaybka ah:
“Arrintan ayaa ah mid dadka la isugu soo dhawaynayo, waa mid daris wanaag muujinaysa iyo in aan wax badan ka ogaanno diinta Islaamka”. ayuu yidhi Kurdis Dian.
Muslimiinta ayaa walwal badan ka qaba dhanka nabadgalyada inta lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadan, sida uu sheegay Maxamed Cumar oo ah maamulaha Masaajidka Darul Faruuq. “Bisha Ramadaan maadaan dadku ay masaajidda ku badan yihiin oo ay taraawiix tukadaan, cabsida waddanka kajirta aad bay usoo kordhaysaa, waxaan u baqaynaa in dadka oo tukanaya lasoo weeraro ama dhibaato la gaarsiiyo”.
Si kastaba ha ahaatee Muslimiinta kunool gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa sheegaya in kulamada noocaan ah ay uga golleeyihiin sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen isdhexgalka bulshada iyo in ay dadka aan Muslimiinta ahayn ka wacyi galiyaan fikradaha nacaybka ku slaysan ee ay ka aaminsan yihiin dadka Muslimiinta ah.
Dalalka reer galbeedka ayaa waxaa marar qaar ka dhaca weerraro dad Muslimiin ah lagu laayo kuwaas oo ay qaadaan dad la sheego in ay neceb yihiin Islaamka.
Previous articleJabuuti oo sameysay wixii ay Soomaaliya uga digtay
Next articleMaxaa ka jira ‘fadeexadda’ ay warbaahinta caalamiga ah ka faafiyeen haweeney Soomaaliyeed oo 69 jir ah?